Sleeveless Patchwork Hippie Lebis - Dhaqdhaqaaqa
Waxay ku timaadaa xajmiyo kala duwan oo ka soo jimicsiga xajmiga si loo daro cabbirada, sida ku cad cabbirkaaga. Dharka Tani waxay fududahay in lagu daro laba kabo oo ah xuubka xuubka ee Roman kaasoo kaliya kor u qaadi doona guud ahaan wadajirka. Waxay la imaanaysaa suunka suunka ee suunka ah, laakiin waxaad sidoo kale ku darsan kartaa bac qurux badan iyo jijimo fudud iyo silsilad.
Qaabka: Patchwork Print
Lakiin kaliya waan helay dharkeyga waan jeclahay! Dharka ayaa wanaagsan, dharka waa muddo dheer sida sawirada iyo qaabkani waa runtii qabow :) Qiimaha wanaagsan ee lacagta.
sawir maraakiib ah oo si buuxda u ah sida saxda dhabta ah, waxaan ahay kilo 88 iyo 173 waxaan amarey 3xl iyo size aad u wanaagsan
maraakiib degdeg ah, dhar duug ah! fududahay xagaaga, fiican. cayaarta qadarka.
Waan jeclahay sheyga, mahadsanid
oo waa inaad u samaysaan waxyaalahaas oo kale, waayo, aniga ayaa ah Rabbiga Ilaahiinna ah. Qalabkani waa mid aad u wanaagsan oo ku habboon
Wuxuu iigu roon yahay aniga. Dharka ayaa dheer. Waan jeclahay duulimaadka. Wanaagsan inaad xirato xagaaga kuleylka badan.
Fiican! Tayo fiican iyo gabi ahaanba qiimo lacageed!
dharka sida sawirka. Qalab adag Xilliga xagaagu wuxuu noqon doonaa mid si fiican u socda.
Fiican. Dharka waa mid toosan maaha. Moodhalku si cad ayuu u xiran yahay cabbir ka weyn inta ay cabbirtayda soo jeedin lahayd